Tsidiho ary milalao Hilton Chicago Oak Brook Hills Resort
Tsidiho ary milalao ny Hilton Chicago Oak Brook Hills Resort
Miorina eo andrefan'ny afovoan-tanànan'i Chicago, ary mipetraka eo amin'ny manodidina an'i Oak Brook, Illinois, izahay dia mahita iray amin'ireo toeram-pisakafoanana tsara indrindra any amin'ny faritr'i Chicago. Ny Hilton Chicago Oak Brook Hills Resort sy Conference Center dia sangisangy, vatosoa misy fitsangatsanganana izay manome ny tanjona tsara indrindra, tsy ho an'ny mpilalao golf ihany, fa fivoriana ara-barotra, fitsangantsanganana, fitsangatsanganana golf, fampakaram-bady sy hetsika ara-tsosialy, ary ny lisitra mitohy.
Miaraka amin'ny efitrano 386 sy ny efitrano fitsangatsanganana fivoriana iray lehibe sy toeram-pivarotana, ny toetry ny fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena, indostrialy sy dobo ivelany ary safidy fisakafoana maro, miteny amiko ve ianao? Tsy ny toerana tsara indrindra ho an'ny Chicagoer ve izany? Izay raha ny hevitro.
Ny toeram-pitsangatsanganana dia miorina eo amin'ny 150 metatra lava, ary ny Willow Crest Golf Club nahazo mari-pankasitrahana dia manome ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra amin'ny tapany avaratra. Mbola tsara kokoa, ankoatry ny fametrahana fitsapana ny fahaizanao, ny Golf Oak Oak Golf ihany koa dia toeram-pamokarana manam-boninahitra manam-boninahitra Audubon, feno farihy tsara tarehy, ary toerana mahafinaritra.
Fa aza milavo lefona amin'ny hevitra hoe hapetraka any amin'ny boonies ianao. Tsy misy zavatra azo lavina amin'ny fahamarinana. Vitsy kilaometatra vitsy monja ny Brookfield Zoo, Morton Arboretum, Chicagoland Speedway ary ny Oak Brook Shopping Center ahitana 160 fivarotana avo lenta, ary safidy fisakafoanana sy fialam-boly bebe kokoa noho izay azonao atao amin'ny kalalao, avelao ny herinandro.
Am-polony am-bisikilety maro sy trano fisakafoanana tsy dia lavitra loatra ary mora amin'ny vahiny izay te-hizaha amin'ny hariva. Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i O'Hare Chicago, ny seranam-piaramanidina Midway ary ny afovoan-tanànan'i Chicago dia ao anatin'ny 30 minitra ao amin'ny hotely
Ny Hilton Chicago Oak Brook Hills Resort sy Conference Center dia karazan'ny marika Hilton: avo lenta, mahavariana, ary mametraka tanteraka ny rafitra izay manasongadina ny fanoloran-tenan'i Hilton amin'ny lalao sy ny mpanaraka azy.
Mihamaro hatrany hatrany ny marika Hilton mikaroka any golf mba hisarika mpilalao tsy ara-dalàna, fa koa amin'ny mpikaroka. Miaraka amin'ireo kianja filalaon'ny kianja 18 eo an-kianja ao amin'ny Willow Brook Golf Club, efitrano fivoriana 36 ary habakabaka 42 500 metatra toradro, miaraka amin'ireo efitra 348 sy efitrano 38, ny Oak Brook Hills Hilton Resor dia ahitana ny tsara indrindra Tsy maintsy atolotra Chicago.
Ny Hilton Chicago Oak Brook Hills Resort sy ny Willow Crest Golf Club Conference Center dia miorina amin'ny trano. Ny rindrin'ny 18 lava novokarin'ny Richard P. Nugent tsy mendrika, dia milalao 6,397 metatra miala avy any an-damosina. Ny trakta par 70 dia manana ny mari-pahaizana fianarana amin'ny 70.9 sy ny fihenan'ny 130. Tamin'ny taona lasa, ny toeram-ponenany dia Marriott, ny kianja golf dia nantsoina hoe Marriott Golf Property tamin'ny taona 2009. Tamin'ny 70, Ho hitanao fa lalao lavitra izy io. Ny lalambe mivezivezy, ny faritra mitoka-monina, ireo bunkers izay toa zara raha misy, ary ny rano amin'ny lalao amin'ny 13 amin'ireo 18, dia manome andro mahafinaritra sy fitsapana ny fahaizanao. Azo antoka fa ny toerana misy ireo trano fisakafoanana dia hampidin-doha ny tsy fahampiana amin'ny fahatsapana fahamendrehana, ary miaraka amin'ny ankamaroan'ny volo izay manolotra fomba fanao mahavaky fo, tsara kokoa ho anao ny miomana amin'ny tsy ampoizina.
Ny Hilton Chicago Oak Brook Hills Resort sy ny Conference Center dia manolotra 384 trano fidiovana sy efitrano fatoriana. Ny mpanamboatra kafe / dite sy minibar dia atolotra miaraka amin'ny fahitalavitra fahitalavitra, fahitalavitra cable ary filma mandoa. Ny efitra fandroana dia misy koveta, akanjo lava, ary haingon-trano. Ny trano koa dia manana Internet, haody haingam-pandeha / radiara famantaranandro.
• Dining: The Restaurant Window and The Grille
· Kianjan'i Willow Crest.
· Toeram-pisakafoanana indostrialy, sauna, toerana fanatanjahan-tena, ary tennis courts.
• Ivotoeram-piantsonan'ny serivisy
· Fivoriana 36 sy fivoriana isaky ny habakabaka 42,500 metatra <.ul>
Ny Hilton Chicago Oak Brook Hills Resort sy Conference Center, 3500 Midwest Road, Oak Brook, Illinois 60523; Antsoy ny 630-850-5555, na tsidiho ny tranokala Oak Brook.
Ny Oak Brook Hills Marriott Resort dia miorina ao Oak Brook I 294 - 19 kilaometatra atsimon'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena O'Hare. Miankina amin'ny toetry ny fifamoivoizana, fiara mandeha 30 minitra eo ho eo izany.
Oak Brook, Illinois, dia 18 kilaometatra avy ao afovoan-tanànan'i Chicago sy O'Hare International Airport (ORD), izay mora mahazo ny I-88, I-290 sy Chicago's Metra Rail amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i O'Hare
Tapa-doko vaovao sy akanjo avy amin'ny Galvin Green Ventil8
Orange County Center sy Lodge Orange County
Ialao lalao roa lehibe ao amin'ny Club Golf-ko-Pa Golf ao amin'ny McDowell, AZ
Club Bay Sandpiper Bay any Port Saint Lucie Golf Resort
Rancho San Lucas Resort, Los Cabos, Meksika
Ny zavatra lehibe hatao any Saint-Pétersbourg
Paul Bunyan Water Park ao The Lodge ao Brainerd Lakes
GI Film Festival 2017 any Washington, DC
Antikary any Hong Kong
Zavatra tokony hatao any amin'ny Beach
3 Antony Tokony Haka Andro Fiomanana ho any Gloucester
Inona no tokony hampidirina ao amin'ny taratasy fangatahana Visa ho an'i Shina
Museum Museum William G. Mather
Toerana tsara indrindra hihainoana hira Hawaiian ao Oahu